သရီးဒီ ချက်ရွန်း ~ The ICT.com.mm Blog
ဒီ၀က်ဘ်ဆိုက်ကတော့ ဂိမ်းနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး သန်းပေါင်များစွာသော လူတွေ တွေ့ဆုံ စကားပြော၊ ဂိမ်းဆော့ကြတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အခန်း၊ ဈေးဆိုင်နဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို စိတ်ကြိုက် အလှတန်ဆာ ဆင်ယင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ကိုယ်ပိုင် ရုပ်ပုံတွေကိုလည်း သရီးဒီအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အတွက် စတား ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကမ်ဘာတ၀န်းက သူငယ်ချင်း အသစ်တွေနဲ့လည်း မိတ်ဖွဲ့နိုင်ပြီး ဖက်ရှင်၊ ပရိဘောဂစတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေ အခမဲ့ ဖန်တီးကာ ဒီ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ တစ်ဆင့် ရောင်းချနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုသူတွေ အနေနဲ့ ဒီ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ပေးထားတဲ့ IMVU ဆော့ဖ်၀ဲကို အခမဲ့ ရယူထားရမှာ ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် အသုံးပြုနေသူပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော် ရှိတယ်လို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က ဆိုပါတယ်။
Newer ရသေ့သူတော်တိုင်မှ ဉာဏ်မခိုင် ဈာန်ယိုင်ပဲ လျှောရတယ်
Older ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်မှတ်
The Christmas countdown is officially on! And how do we know? Because the Marks & Spencer Christmas advert has just
အမျိုးသမီးတွေကို လွှမ်းမိုးစေနိုင်မယ့် Gadgets
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းထဲက ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ နည်းပညာ ပစ္စည်းတွေကို ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနားထောင်နေကြတဲ့ ဖက်ရှင်...
နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြား၊ ဘယ်လိုပင် ယဉ်ကျေးမှု မတူညီနိုင်ပါစေ၊ တူညီတာကတော့ အခုခေတ် မိန်းမတွေဟာ လှချင်၊ ပချင်ရုံမျှမက ပုရိသတွေကို စွဲဆော...
အလှအပရေးရာ၊ ဖက်ရှင်၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပါ။ ဆံကေသာ၊ အသားအရေ၊ မိတ်ကပ်၊ မျက်ခုံးအလှ၊ နှုတ်ခမ်း၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ လက်သ...